OnePlus 3 Buyekeza - Izindaba Rule
Previous OnePlus Smartphones ziye ababethi "iwuhlelo ngababulali!". Lokho namanje cha ngempela olunembile, kodwa OnePlus 3 is a smartphone enhle kakhulu ontengo yakhe yayinqunyiwe at ibe ngaphansana kwesigamu sezwe intengo izimbangi top.
Premium aluminium umzimba, screen okuhle nekhamera, omkhulu zeminwe Enani, isofthiwe bloat-free, nebhethri losuku - at isigamu izindleko Samsung
Lesi sihloko osesikhundleni “OnePlus 3 ukubuyekeza: iwuhlelo phone at maphakathi no-range price” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesibili 14th June 2016 17.00 UTC
The OnePlus 3 is yakamuva top-ekupheleni smartphone ngemali maphakathi no-range amanani kusuka nomakhi Chinese OnePlus, alinikela nakho elicwengekile for kakhulu esingaphansi kuka Samsung, HTC, LG noma Apple.
The 3 smartphone sesine OnePlus - a uqalisa encane Chinese kuhloswe ukunikeza the best isipiliyoni okunokwenzeka umkhiqizo imali ngokuphawulekayo esingaphansi izimbangi - futhi isinyathelo esikhulu kuzo zonke izinhlangothi phezu OnePlus ngonyaka odlule 2.
phezulu kuya phansi Aluminium
I capacitive izinkinobho zombili inkinobho ekhaya kungaba izinhlangothi ashintsha, Kufanele ufuna inkinobho emuva ngakwesokudla. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The OnePlus 3 kuyinto ifoni yonke-metal ne kancane agobile emuva, imiphetho smooth and contoured ingilazi front ukuthi tapers off ekufezeni imiphetho. It uzizwa behlangene kahle kakhulu, ayisimanga esandleni kwafana kunakho konke kusuka izimbangi high-ontengo yakhe yayinqunyiwe.
5.5in The isihenqo esigcwele HD ogqame kakhudlwana, nge abansundu inky, imibala ezicebile futhi abamhlophe excellently white. Akunjengesikhathi lesinqumo high, futhi ngenxa yalokho njengoba pixel-aminyene njengoba Samsung Galaxy S7 Edge, Nokho, okuyinto side-by-side zile. Kuba futhi hhayi elikhulu ukusetshenziswa in isengezo-ngokoqobo earphone, kodwa abathengi iningi uyojabula izinga kwesikrini.
Nombukiso Ubuye bezels emincane kakhulu ngapha langapha, okuyinto kwenza OnePlus 3 impela emincane okwesikhathi smartphone ezinkulu-bahlolwe, futhi ukulawuleka kakhulu ngoba ubukhulu jikelele idivayisi kugcinwa encane impela. Uma kuqhathaniswa the best 5.5in smartphone etholakalayo, the Samsung Galaxy S7 Edge isikrini yayo banana, the OnePlus 3 kuyinto seNingizimu neAfrika 2.1mm kuphela. Kuba njalo 1.8mm kuphela ende edlula Samsung.
Isinciphisi isaziso mkhulu. Google kufanele wenze kube yingxenye ejwayelekile ye-phone Android. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Enye yezinto izinto ezingatholakali kwenye indawo OnePlus kuyinto isinciphisi isaziso ohlangothini ucingo ukuthi sekuqalile phakathi kua sile lo, zize kuqala futhi zonke izaziso. Kuhle futhi zonke ocingweni Android kumele babe munye.
Amagama: isikwele-core Qualcomm Snapdragon 820
Isistimu esebenzayo: Android 6.0.1 OxygenOS
Ikhamera: 16MP akha ikhamera nge Izifo Ezingosomathuba, 8MP ebheke phambili ikhamera
Top Spec kuyinto cishe Overkill
Dual Sim ukwesekwa engavamile e-UK, ikakhulukazi uma smartphone top-Spec. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The OnePlus 3 ugijimela yakamuva top-ekupheleni smartphone chip Qualcomm, Snapdragon 820, okuyinto cishe amandla iningi Smartphones iwuhlelo for esele 2016. Kuyinto chip pretty enamandla ukuthi uyozisingatha cishe noma yini umuntu cishe zama ukwenza nge smartphone.
Into eyodwa abeke OnePlus 3 ngaphandle iphakethe 6GB yayo RAM. Smartphones Iningi 2 noma 3GB, nabathile ezifana 4GB Galaxy S7 Edge kokuba. I RAM ngaphezulu ifoni ine zokusebenza more namathebhu e isiphequluli bangathembela avuliwe ngesikhathi esifanayo, kodwa ngokungagwegwesi 6GB kuyinto Overkill kancane ukuthi yini engenzeka okwamanje. Ebheka imemori qapha afakwa Android, we 5.6GB of RAM etholakalayo, I ngokulambisa wake wasebenzisa ngaphezulu kuka 3.5GB. Njengoba nge computer, Nokho, ngabe isazoba badinga imemori eningi njengoba izinto inqubekela, ngakho ungase asibheke njengoba ikusasa-okuhlola.
The OnePlus 3 kwaba kushesha futhi kahle kulo lonke testing yami, Kuncane endleleni ka lag obonakalayo noma ngingiza kuphi. Lize iphathwe ngomzuzu-30 udlala sessions ngaphandle kokuthola hot too ngosuku lapho ezingeni lokushisa elifanele hit 25C.
Asetshenziswa njengoba idivayisi yami eyinhloko amahora amane ukulalela umculo nge-Bluetooth headphones, amahora amathathu wachitha ukuphequlula noma usebenzisa izinhlelo zokusebenza, udlala kahle ngezikhathi ezithile kanye nezithombe ukuthatha, ezaqhutshwa izaziso push usuku lonke, the OnePlus 3 kwathatha 24 amahora emkhatsini amacala.
Ngaqaphela ukuthi impilo yebhethri emini kwaba kuhle impela – ziyingxenye ezinye namandla Smartphones ephumelelayo – kodwa leso sikhathi eceleni avuke engasenalo yayihlupheka, kokulahlekelwa phakathi 12 futhi 16% ngenkathi osale buthule etafuleni eliseceleni kombhede amahora ayisikhombisa. kumadivayisi Iningi alahlekelwa nxazonke 1% hha ngehora.
Dash Charge ubukeka futhi usebenza njenganoma yimuphi nje omunye ikhambi ukushaja fast, kodwa ifoni engakutholi hot futhi ungakwazi ukuyisebenzisa ngenkathi ishaja futhi namanje phezulu it up ngesilinganiso esiphezulu. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Udade OnePlus uye ilayisense smartphone Chinese akhiqize fast ukushaja technology Na sika, nesebenzela ngokuhlukile ukwedlula iningi labanye okusheshayo ukushaja izixazululo yokuhamba chips fast ukushaja ku-adaptha yamandla, kunokuba ifoni. Uhlelo Dash Charge ushukumisela umthombo ngobukhulu ukushisa ngesikhathi ishaja kusukela nokuzabalaza enyinyekile kwifoni eduze ibhethri into ixhunyiwe odongeni, okusho ukuthi ifoni angakwazi gcwalisa ngokushesha ngaphandle kokuba sikhathazeke ngakho okweqile.
Ukushaja kusuka zero kuya 100% wathatha 72 amaminithi, ngenkathi zero 75% wathatha 36 amaminithi. Lokho akuyona okuningi ngokushesha ukwedlula best of the ukuphumula lapho ungayisebenzisi. Umehluko wukuthi ifoni akazange nokushisa nhlobo, futhi angahle kulesinye sikhatsi asetjentiswe like evamile ngaphandle nomthelela izinga ukushaja. kumadivayisi Iningi ishise kakhulu futhi kumelwe ijubane isivinini ukushaja, ikakhulukazi uma umuntu usebenzisa ucingo screen on.
Yini embi ngalo wukuthi uma Ukushaja OnePlus 3 nge yimuphi non Dash ophethe ehambisanayo amandla adapters, ezifana ikhompyutha, the amacala ifoni ingasheshi, rate evamile. Dash amashaja abiza £ 16 ngamunye – ngakho kusuke kukufanelekele ukuli- ukuthenga esinye nefoni.
The OnePlus 3 ubuye a esikabili-Sim ifoni, okuyinto ngempela ezingavamile in the UK, okusho ungaba izinhlelo ezimbili ezehlukene, amanethiwekhi kanye nezinombolo zocingo yokuxhuma eyodwa yocingo – ewusizo for ethwele phone umsebenzi futhi ifoni siqu idivayisi eyodwa, ngokwesibonelo.
Better namanje, angakwazi ukusekela amakhadi amabili Sim kokubekwe eceleni kanyekanye, okusho womabili amakhadi kungenziwa uxhumeke kwinethiwekhi 4G / 3G ngesikhathi esifanayo. ukwesekwa eyodwa kuphela ikhadi Iningi kwimodi 2G, discounting amanethiwekhi ezifana UK Three, okuyinto musa ukusebenzisa isignali 2G.
OxygenOS, ngaphandle uma ungathandi it
OxygenOS muhle, kodwa i-bootloader evulekile kusho ungakwazi ukuyishintsha ngomunye version of Android uma ufuna. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
OnePlus kuveza inguqulo langalezo Android esibizwa OxygenOS. Le nguqulo yakamuva kusekelwe Android 6.0.1 Marshmallow futhi phezu kobuso kubukeka akuhlukile version of Android egijima kwi Smartphones Nexus ye-Google.
OxygenOS has a Sokuqalisa ukuhluka kancane nge okuthiwa Shelf yenkampani on Ifasitelana lama kwesokunxele-iningi sasekhaya – indawo ngokubeka amawijethi, zokusebenza kwezithombe nokukhulekelwa sezulu. Abasebenzisi futhi babe on-screen navigation izinkinobho, noma usebenzisa i-capacitive touch nengezansi screen ukusindisa isikhala kanye ngokwezifiso ngalokho abakwenzayo.
I Shelf imayelana ukuphela komehluko owawukhona version Nexus Android ye-Google. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ngokwesibonelo, Ngazibekela empompini kabili esanda esetshenziswa zokusebenza inkinobho ukuze ushintshe ngokushesha kuze kube sekugcineni esetshenziswa lokusebenza – isici ukuthi ingezwe version elilandelayo of Android N. A ukukhethwa nokunye ukukhuluma ngezimpawu ezisikisela, kanye kuma ukuveza imodi imilindelo esibukweni uma izaziso ebedla ngokulingenela noma isebenzisa ikhamera bona uma isandla sakho phezu kwesikrini baphaphame, ayatholakala.
OxygenOS ingenye ngcono, wahlubula emuva futhi izinguqulo bloat-free of Android.
The OnePlus 3 zeminwe Enani kungenye yezindlela ezingcono kakhulu ekhaya-inkinobho isitayela izinzwa etholakalayo. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Imisebenzi Inkinobho ekhaya isithwebuli zeminwe, okuyinto fast and isabele. Iningi isikhathi ababeyobona isithupha isikhathi sami sokuqala, kodwa ngezinye izikhathi kwakuyoba abalwa kanzima lapho isithupha sami akazange ngempela amboze yonke inzwa ucondze kuxaka.
It is kakhulu ngcono phezu OnePlus 2, futhi kuphela kancane kubi kunokwakuqala abangcono kakhulu Huawei.
Insiza OnePlus ikhamera uzama ukwenza kube nzima ukuthatha isithombe esibi futhi uyaphumelela ingxenye enkulu. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The main 16-megapixel ikhamera emuva okwazi ezinye isibhamu kuhle ngaphesheya izimo zokukhanya ahluka. With izibani okuhle ikhamera ikhipha izithombe ezinemininingwane ngemibala kwetfulwe siyaphila ngaphandle izinkinga ezinkulu. Ezimweni ezinzima ukukhanyisa, njengalezo ngaphansi izibani, izithombe Ungabheka kungabukeki kancane at isitshalo egcwele.
Akukona ngempela ikhamera ezekhethelo, kodwa kusenzima phezulu lapho Smartphones kubiza uhhafu okungako.
Uhlelo lokusebenza ikhamera lilula ukusebenzisa ukuze uthole izithombe ezinhle, futhi ine Izilawuli umnyuziki manual ngokusekelwa RAW uma kunjalo wayefisa. Slow motion 720p isiqophi at 120fps iyatholakala, ne 4K ukuqopha at 30fps uma kudingwa.
I 8-megapixel selfie ikhamera on the front ikhiqiza ezinye zezinto wedwa okuningiliziwe kakhulu Sengike ngakubona, ngisho nangaphansi kwezimo ezinzima kuqhathaniswa umbani.
I grey aluminium has a tint okuncane nje bomvu lapho kukhanya khona ezithile
I bezels tiny lakwenza kwaba lula kakhulu ukuba ngiyibambe, kodwa ngakuthola kulula kakhulu ukuba kusebenze capacitive navigation izinkinobho usentendeni yesandla sami
Ukuthulisa ifoni nge isinciphisi isaziso kulula futhi fast
Dash Chargers amandla namanye amadivayisi kuze ku 2A, okuyinto evamile ukushaja isilinganiso
OnePlus ethengisa Dash imoto ishaja for £ 25
It got NFC, okuyinto OnePlus 2 Okumangazayo yena akhenge enze njalo – kuhle Android Pay
Imikhumbi Ifoni nge bootloader singakhiyiwe okwenza kube lula ukulayisha izinguqulo siko Android, Kufanele yini uthande OxygenOS
Senziwa umvikeli screen pre-ezifakiwe, kodwa like Abavikeli kakhulu screen on ingilazi contoured noma banana, umi phandle like a thumb sore.
Aluminiyamu banana emuva Kuyangijabulisa esandleni belays yayo intengo £ 309. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The OnePlus 3 kubiza £ 309 ($399) kuyatholakala in gray nge umbala legolide etholakalayo kamuva. Ifoni kuzotholakala iqonde kusuka OnePlus ngaphandle impikiswano umeme uhlelo yenkampani.
Ukuze uqhathanise, the 5.5in Samsung Galaxy S7 Edge kubiza £ 639, the 6P Nexus Google kubiza £ 449 kanye Huawei ikhasi 9 Plus kubiza £ 500.
Ngoba yakho £ 309 uthola enhle, ezenziwe kahle smartphone metal, with reasonable battery life, good screen and cameras, and snappy performance. You also get dual-Sim support and 64GB of storage built in. It is easily the best smartphone OnePlus has made.
Buhle: all-metal, great fingerprint sensor, isihenqo ezinhle, fast charging, good cameras, excellent notification slider, dual-Sim with dual standby, cheaper than rivals
Bawo: no removable battery, no expandable storage, slow charging from non-Dash charge power adapters, screen low res for VR
OnePlus 2 ukubuyekeza: a real 'iwuhlelo killer'?
Android, Isigaba, Omakhalekhukhwini, Izibuyekezo, Samuel Gibbs, Smartphones, Technology, UK Technology
← Huawei ikhasi 9 Plus ukubuyekeza Umdlavuza Webele Cell Growth okuhlanganisiwe by Kwamathambo Drug →